Reading Week (2) - Smart OET Training Centre
Day 1 Lessons ➡ Day 1 တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Reading Part (C) Format Reading Test (1) - Part (C) ➡ Day 1 တွင် Part (C) Format ကို လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဖြေဆိုရပါမည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark complete ကို နှိပ်၍ သင်ခန်းစာများသို့ သွားနိုင်ပါသည်
Reading Part (C) Format
🔸 ဒီ Video ထဲမှာ Reading Part (C) Format အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ် 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို ချိန်လို့ ရပါတယ် 🔸 Computer မှာ Full screen mode / Phone မှာ Rotate Screen နဲ့ကြည့်ရင်လဲ စာလုံးတွေ ပိုဖတ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ် Reading Part (C) Format 🔸Duration = 15 minutes 🔸 Video ကိုကြည့်ပြီးလျှင် Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
Reading Test (1) – Part (C) – Text (1)
Part (C) - Extract (1) How to Answer 🔸 Multiple Choice မေးခွန်းများကို (A, B, C or D) မှန်ရာတစ်ခုကို ရွေးပြီး ဖြေဆိုရပါမည်🔸 စာပိုဒ်တစ်ခုစီ၏ number များကို နှိပ်ပြီး ဖတ်ပါ🔸လေ့လာထားသော Part (C) ကို ချဉ်းကပ်ဖြေဆိုနည်း အတိုင်း လေ့ကျင့်ပါ🔸 မေးခွန်း (၈)ခုကို အဖြေများကို ရွေးပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ🔸Course Book စာအုပ်မှ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်၍ စာအုပ်ထဲတွင်‌ ဖြေပြီး အဖြေတိုက်လဲ ရပါသည် Text 1 : Seasonal Influenza Vaccination ... Read more Reading Test (1) – Part (C) – Text (1)
Reading Test (1) – Part (C) – Text (2)
Part (C) - Text (2) How to Answer 🔸 Multiple Choice မေးခွန်းများကို (A, B, C or D) မှန်ရာတစ်ခုကို ရွေးပြီး ဖြေဆိုရပါမည်🔸 စာပိုဒ်တစ်ခုစီ၏ number များကို နှိပ်ပြီး ဖတ်ပါ🔸လေ့လာထားသော Part (C) ကို ချဉ်းကပ်ဖြေဆိုနည်း အတိုင်း လေ့ကျင့်ပါ🔸 မေးခွန်း (၈)ခုကို အဖြေများကို ရွေးပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ🔸Course Book စာအုပ်မှ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်၍ စာအုပ်ထဲတွင်‌ ဖြေပြီး အဖြေတိုက်လဲ ရပါသည် Text 2: Addiction to prescription Paragraph ... Read more Reading Test (1) – Part (C) – Text (2)
Congratulation! You have completed Week2- Day 1 Lessons. Summary of Day 1 Lessons Reading Part (C) Format Reading Test (1) - Part (C) ➡ Reading Format (A +B+C) ၃မျိုးလုံး ကို လေ့လာပြီး ဖြစ်သောကြောင့် နောက်ရက်များတွင် မေးခွန်းအစုံလိုက် လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ လေ့လာပြီးသား သင်ခန်းစာများကိုလည်း အချိန်မရွေး ပြန်လေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်
Day2Lessons ➡ Day2တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Reading Test (2) - Part (A) Reading Test (2) - Part (B) Reading Test (2) - Part (C) ➡ Day2တွင် Reading Test (2) မှ လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဖြေဆိုရပါမည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark complete ကို နှိပ်၍ သင်ခန်းစာများသို့ သွားနိုင်ပါသည်
Reading Test (2) – Part (A)
How to Answer 🔸 ပေးထားသော Text ၄ခု ကို ဖတ်၍ မေးခွန်းများကို ဖြေပါ🔸 Text များကို ခပ်သွက်သွက် Scan လုပ်ပြီး ဖတ်၍ Matching မေးခွန်း အမျိုးအစားကို ဖြေပါ🔸 ထို့နောက် စာပိုဒ်များ၏ အနေအထားကို သိလာသောအခါ Short Questions နှင့် Sentence Completion အမျိုးအစားများကို ဆက်လက်ဖြေပါ🔸 ပေးထားသော စာပိုဒ်များမှ အဖြေကို ကူးရေးရသောကြောင့် စာလုံးပေါင်းများ မှန်ဖို့ လိုပါသည်🔸 Phone နှင့် ကြည့်လျှင် Screen Rotation လုပ်ပြီး ဖတ်လျှင် ပိုအဆင်ပြေပါသည်🔸 အဖြေများကို ဖြေပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ🔸Course Book စာအုပ်မှ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်၍ စာအုပ်ထဲတွင်‌ ဖြေပြီး အဖြေတိုက်လဲ ... Read more Reading Test (2) – Part (A)
Reading Test (2) – Part (B)
Part (B) How to answer 🔸 Multiple choice မေးခွန်းများကို A / B / C မှန်ရာကို ရွေးပြီး ဖြေရပါမည်🔸 မေးခွန်း (၆)ခုကို အဖြေများကို ရွေးပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ How to Check 🔸 မေးခွန်း (၆)ခုကို အဖြေများကို ရွေးပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေပြီးမှသာ Finish ခလုတ်ပေါ်လာပါမည် ဖြေပြီးလျှင် Explanation Video ကိုကြည့်ပြီး ရှင်းချက်များကို လေ့လာပါ🔸 ပြီးလျှင် Mark Complete ကို နှိပ်၍ ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ပါသည် https://vimeo.com/551292253
Reading Test (2) – Part (C) – Text (1)
Part (C) - Text (1) How to Answer 🔸 Multiple Choice မေးခွန်းများကို (A, B, C or D) မှန်ရာတစ်ခုကို ရွေးပြီး ဖြေဆိုရပါမည်🔸 စာပိုဒ်တစ်ခုစီ၏ number များကို နှိပ်ပြီး ဖတ်ပါ🔸လေ့လာထားသော Part (C) ကို ချဉ်းကပ်ဖြေဆိုနည်း အတိုင်း လေ့ကျင့်ပါ🔸 မေးခွန်း (၈)ခုကို အဖြေများကို ရွေးပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ🔸Course Book စာအုပ်မှ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်၍ စာအုပ်ထဲတွင်‌ ဖြေပြီး အဖြေတိုက်လဲ ရပါသည် Text 1 : Medical Impact of ... Read more Reading Test (2) – Part (C) – Text (1)
Reading Test (2) – Part (C) – Text (2)
Part (C) - Text (2) How to Answer 🔸 Multiple Choice မေးခွန်းများကို (A, B, C or D) မှန်ရာတစ်ခုကို ရွေးပြီး ဖြေဆိုရပါမည်🔸 စာပိုဒ်တစ်ခုစီ၏ number များကို နှိပ်ပြီး ဖတ်ပါ🔸လေ့လာထားသော Part (C) ကို ချဉ်းကပ်ဖြေဆိုနည်း အတိုင်း လေ့ကျင့်ပါ🔸 မေးခွန်း (၈)ခုကို အဖြေများကို ရွေးပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ🔸Course Book စာအုပ်မှ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်၍ စာအုပ်ထဲတွင်‌ ဖြေပြီး အဖြေတိုက်လဲ ရပါသည် Text2: A New Implant ... Read more Reading Test (2) – Part (C) – Text (2)
Congratulation! You have completed Week2- Day2Lessons. Summary of Day2Lessons Reading Test (2) - Part (A) Reading Test (2) - Part (B) Reading Test (2) - Part (C) ➡ နောက်ရက်များတွင်လည်း Reading မေးခွန်းအစုံလိုက် လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ လေ့လာပြီးသား သင်ခန်းစာများကိုလည်း အချိန်မရွေး ပြန်လေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်